3d ပရင်တာ, Desktop ကို 3d ပရင်တာ, 3d ပရင်တာနန်းကြိုးအမျှင်လေးများ - MINGDA
2009 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးရှန်ကျန်း MINGDA နည်းပညာ Co. , Ltd မှသည်, OEM / လိမ္မော်ရောင် & 3D ပရင်တာ၏ရောင်းအားကိုအထူးပြုနေတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း, အပြည့်အဝကွဲပြားခြားနားသော users.The ထုတ်ကုန်များ၏လိုအပ်ချက်များရှိသည်ဟုအစည်းအဝေး, DIY နှင့်လုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်တွေနှစ်ခုစီးရီးကိုပိုင်ဆိုင် ထိုကဲ့သို့သောအီး, FCC သည်နှင့် ROHS အဖြစ်အများအပြားတွင်နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းလွန်, ကြှနျုပျတို့ဥရောပသို့တင်ပို့, အမေရိကန်, သြစတြေးလျ, ရုရှား, နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, ဂျာမနီ, စင်္ကာပူ, အီဂျစ်, အိန္ဒိယထက်ပိုမို 180 နိုင်ငံများ ...
ရှန်ကျန်းခုနှစ်တွင် 3D ပရင်တာစက် OEM / လိမ္မော်ရောင်ထုတ်လုပ်သူ
ငွေရတတ်သောသူ OEM အတွေ့အကြုံကို / 1year အာမခံ / တစ်သက်တာနည်းပညာပံ့ပိုးမှု / အမြန်ပေးပို့
Professional က R & D နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့် 3D ပရင်တာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအရည်အချင်းများ, အေဂျင်စီအပြောင်းအလဲနဲ့အတှေ့အကွုံ 8 နှစ်
MINGDA MD-16 160 * 160 * 160mm နီ
နှစ်ဦးကိုအရောင်များ 3D ပရင်တာ ...
MINGDA နက်ရှိုင်းသောအပြာရောင် PLA က F ...
MINGDA နက်ရှိုင်းသောအစိမ်းရောင် PLA ...
MINGDA Grey က PLA Filame ...
MINGDA အဝါရောင် PLA Fila ...
ငါရေကြောင်းတာဝန်ခံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကုန်ကျစရိတ် မှလွဲ. ပိုပြီးအပိုစွဲချက်များဆပ်ဖို့လိုအပ်ပါသလား?
3d ပရင်တာနန်းကြိုးအမျှင်လေးများ , 3d Printer Carbon Fiber, 3d ပရင်တာစက်ဆိုင်သောကိရိယာတန်ဆာပလာ , နိုင်လွန်ဆိုင်သောကိရိယာတန်ဆာပလာ 3d ပရင်တာ , လူကြိုက်များသော Desktop ကိုနန်းကြိုးအမျှင်လေးများ 3d ပရင်တာ , Diy 3d Printer Kits,